eNasha.com - प्रशान्तले जितेनन् भने ?
अब एक दिन मात्र छ, इण्डियन आइडोलको घोषणा हुन । तपाइँलाई लागिरहेको होला, प्रशान्तले जित्लान् । अथवा तपाइँको मुटु पनि धड्किरहेको होला, अन्य करोडौँ नेपाली जाति र उनलाई रुचाउन नेपालीइतर जातिको धड्किएझैँ । तर यदि उनले जितेनन् भने के होला ?
केही व्यक्तिहरु यदि उनले जितेनन् भने नेपालका नेपालीहरुको कोढ्याइँ प्रमुख जिम्मेवार हुने बताउँछन् । कालिमाटीका जीतेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्- "मैले प्रशान्तको नाम भजाएर पैसा भेला पार्नेहरुको निकै लामो जत्था देखेँ । मलाई शङ्का छ, तिनले उठाएको चन्दाको सदुपयोग गरेका छन् ।"
हुन पनि जीतेन्द्रको शङ्का नाजायज होइन । गएको साता इण्डियन आइडोलका सहभागीहरु चाङ, अङ्किता, इमोन, चारु, पर्लिन र दिपालीले आफ्नो गायन प्रस्तुत गरिरहँदा कर्न्र्सट वरपर प्रशान्तका नाउँमा कुस्त रकम सङ्कलन गर्नेहरुको कुनै कमी थिएन । (तलका तश्वीर हेर्नुहोस्) ।
त्यसैले प्रशान्तलाई रुचाउनेहरुको यो चिन्ता पनि जायज छ । जस्तो कि भर्खरै दिल्लीबाट प्रशान्तलाई जिताउन र प्रशान्तको पक्षमा प्रचार प्रसार गर्न आइपुगेका दार्जिलिङका ज्ञानेन्द्र अर्यालले इनशाडटकमसँग भनेका थिए- "चन्दा उठाउनेहरु अधिकांश चाहिँ दार्जिलिङ जान चाहिरहेका छन् । काठमाडौँबाट दार्जिलिङ जानु जति टाढा छ, यहाँबाट वीरगञ्जको छेउछाउ पुग्नु उति नै नजिक । त्यसैले दार्जिलिङमा गएर समय नष्ट गर्नुभन्दा यहाँको नजिक पर्ने भारतीय नाकाबाट प्रशान्तका पक्षमा भोट गर्नु बढी जाती हुन्छ ।"
अहिलेसम्म प्रशान्तका नाममा कति रकम उठ्यो, तिनको सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुराको लेखाजोखा कसैले राखेको छैन । हुन पनि हामी भावुकतामा बढी काम गर्ने भएकाले भावनाका अघिल्तिर हिसाबकिताबलाई टाढा राखेका हौँला । तर हामी हिसाबकिताबमा जहिले पनि कमजोर छौँ । हामीले जुनसुकै काम गर्दा पनि भावुकतामा गर्छौँ र यो काम किन र केका लागि भन्ने प्रश्न आफैँसँग कम गर्छौँ ।
यदि यस पटक प्रशान्तले जितेनन् भने एउटा नेपालीको गरिमा हार्नेछ । यो चाहिँ पक्का भइसकेको छ । किनभने हामीले जिताउन सक्ने अवस्थामा हुँदा पनि जिताउन सकेनौँ भन्ने हामीलाई सधैँभरि थक्कथक्क लाग्नसक्छ । त्यसैले जम्मा पारिएका र उठेका रकमको सदुपयोग जतिसक्दो बढी गर्न ज्यादै जरुरी छ ।
केही व्यक्तिहरु अमित पलको गायकीको प्रशंसा गर्दै प्रशान्तको जिताई सरस्वतीको अपमानसमेत हुने जिकीर राख्छन् । तर यो सरस्वतीको अपमान हामीले गरेको हुने छैन । यो त सोनी टीभीले गरेको हुने छ । किनभने उसले कार्यक्रमको डिजाइन नै यसरी गरेको छ कि जसलाई मन पर्‍यो, उसलाई बढीभन्दा बढी भोट गर्न पाइन्छ । यदि गायकीभन्दा भोटले जिताउन सकिन्छ भने कमजोर नै सही किन नजिताउने ?
अहिले त प्रशान्त हेर्दाहेर्दै रक स्टार बनिसकेका छन् । अब हामीले उनलाई जिताउनु कुनै कमजोर व्यक्तिलाई सिंहासनमा बसाउनु चाहिँ हुने छैन । उनी त्यस लायक् चाहिँ बनिसकेका छन् । तर के हामीले चाहिँ हाम्रो चन्दा राम्रोसँग उपयोग गर्‍यौँ ? अनि यदि प्रशान्तले जितेनन् भने के चाहिँ पक्का हो भने नेपालबाट उठेको चन्दाको राम्रैसँग दुरुपयोग भयो । हामीले प्रशान्तलाई हृदयमा राख्ने भन्दा पनि फेशनका लागि उपयोग गरेछौँ भन्ने हुन सक्छ । के तपाइँले उठाउनु भएको चन्दाको सदुपयोग भएको छ ?
रियालिटी शो भीडबाहिर रमाइलो अभिनेता विदेशमा अभिनेत्री हल्ला र वास्तविकता नयाँपन निर्माता श्रृङ्खला भित्री कुरा